Mitazam-potsiny ny fanjakana : tsy ho ela dia ho 3.000 Ar ny kilaon’ny vary | NewsMada
Mitazam-potsiny ny fanjakana : tsy ho ela dia ho 3.000 Ar ny kilaon’ny vary
Par Taratra sur 01/02/2017
Tsy henatra tsy tahotra intsony ny mpaninjara sy ny mpamongady mampiakatra ny vidim-bary isan-kerinandro. Tato anatin’ny telo herinandro monja, nihoatra 600 Ar sahady ny vidiny ho an’ny mpanjifa. Raha mitohy izao fanararaotana mihoampampana izao, tsy ho ela dia ho 3.000 Ar ny kilaon’ny vary eto an-dRenivohitra, lafo noho ny tany Taolagnaro. Tsy hita soritra mihitsy ny finiavan’ny fanjakana hiaro ny mpanjifa.
200 Ar isan-kerinandro ny fisondrotana! Manararaotra samy manao izay saim-pantany ny mpivarotra mpamongady sy ny mpaninjara amin’ny vidim-bary eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha 1.600 Ar ny kilaon’ny makalioka sy ny vary gasy mena, tapa-bolana lasa izay, niakatra 1.800 Ar izany ny herinandro lasa teo, ary tafakatra 2.000 Ar sahady nanomboka ny alatsinainy teo ary misy aza ny efa mivarotra 2.200 Ar .
Izany hoe, niakatra 200 Ar isan-kerinandro, 400 Ar tao anatin’ny tapa-bolana, koa hahatratra 800 Ar amin’ny tapaky ny volana febroary, manome 2.400 Ar ny kilao ary ho 2.800 Ar na ho 3.000 Ar mihitsy amin’ny fiandohan’ny volana marsa. Saika tsy mampiseho ny vidim-bary intsony ny ankamaroan’ny mpivarotra, toy ny eny Amboditsiry, Anjanahary, Andravoahangy, Besarety, 67 ha. Midika izany fa tahirim-bary efa azony ny amidiny fa tsy niankina tamin’ny nividianany azy tany amin’ny mpamongady. Ireto farany koa, efa nanararaotra hatramin’izay manafim-bary, na mampiaka-bidy avy hatrany.
Tsy misy ny fiarovana ny mpanjifa
Nihaona tamin’ireo mpandraharaha ny minisiteran’ny Varotra sy ny ao amin’ny Fambolena, ny 23 janoary lasa teo. Nifampidinihana ny hanafaran’ireo mpandraharaha vary any ivelany, hanentsenana ny tsy fahampian’ny vokatra varialoha tamin’ity taona ity. Nanome toky fa hiaro ny mpandraharaha koa izy ireo manoloana ny fifaninanana tsy madio ataon’ny tsy manara-dalàna.
Ankoatra izany, tsy hita mihitsy ny asa vita sy ny lanjan’ny fikambanan’ny zon’ny mpanjifa, fa mionona amin’ny fimenomenomana ihany raha hanao aza.
Midika ireo fa kabary ambony latabatra fotsiny ny an’ny fitondrana, fa tsy misy mihitsy ny fitsinjovana sy fiarovana ny mpanjifa, toy ny fanaony amin’ny fampiakarana ny vidin-tsolika sy ny saran-dalana ihany.
Efa mampiaka-peo ny ankamaroan’ny mpanjifa. Tsy misy sehatra ahafahany maneho hevitra afa-tsy ny fitarainana any amin’ny “onjampeo tsy miankina” na any amin’ny tambajotra sosialy toy ny “facebook”, ohatra. Efa nisehoan’ny hatezeram-bahoaka ny delestazy, toy ny tany Farafangana, ny fitsaram-bahoaka ho an’ireo jiolahy, sao sanatria izay vao tena hipoaka ny sarom-bilany satria ny foto-tsakafony mihitsy no voakitikitika. Tsy nohenoina ny hafatra sy ny anatry ny iraky ny papa, amin’ny hoe “jereo ny zo aman-kasin’ny maha olona”.
Voambolana nipoitra fony Repoblika faharoa ny hoe “varo-maizina”. Nivoaka koa, nifanandrify tamin’io ny sampandraharaha “Bemidina” niady taminy, nanara-maso ny vidin-javatra teny amin’ny mpaninjara. Tsy manana paikady mahomby hiatrehana ny fanararaotan’ny mpaninjara, mifandray mivantana amin’ny mpanjifa, ny fanjakana foibe, ankehitriny. Na milaza fa tsy mitsabaka amin’ny famerana ny vidin-javatra sy ny fandraharahana aza ny fanjakana, misy ny vanim-potoana “ankamehana”, tsy maintsy handraisana fepetra manokana, fahita maneran-tany, afa-tsy eto Madagasikara irery ihany.